कम्मर दुख्ने, अनुहारको दाग वा पोतो हटाउने अचुक ओखती कालो तिलको प्रयोग गर्ने तरिका « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
कम्मर दुख्ने, अनुहारको दाग वा पोतो हटाउने अचुक ओखती कालो तिलको प्रयोग गर्ने तरिका
काठमाडौँ, १३ भदौ
कालो तिल अथवा तिलबाट प्राप्त हुने बिऊ तेल उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अनुहारमा चायाँ, पोतो वा दाग, कालो घब्वा आदि आएमा त्यसलाई सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। साथै कम्मर दुख्ने रोगलाई पनि निको पर्न सकिन्छ त्यसको लागि तल दिएको उपायहरुलाई नियमित प्रयोग गर्नु पर्छ।
मुखमा पोतो वा दाग आएमास् जीरा, बोके जीरा, कालो तिल, सरस्यूँ र रायो सबैको चूर्ण बराबर मिसाएर दूधमा फिटेर बेलुका सुत्ने बेलामा नित्य पोतो वा दागमा लगाउनाले ठीक हुँदै जान्छ।
कम्मर दुख्ने रोगमास् आधा पाउ भुटेको कालो तिल, १० ग्राम घोडताप्रे, १० ग्राम धूलो मरिच, १० ग्राम सूठो धूलो, १० ग्राम धूलो पिप्ला, ५ ग्राम फुराएको हिङको धूलो सबै मिसाएर सिसीमा राख्ने र दुख्न सुरु भएपछि ३ पटक धूलोलाई मिश्री पानीमा पकाएर खाँदा कम्मर दुख्ने रोग निको हुँदै जान्छ।
यो पनि पढ्नुसस् एक केश्रा लसुन मुखमा ३० मिनेटसम्म राख्नाले शरिरलाई हुन्छ यस्तो अपत्यारिलो फाईदाहरु १ एकचोटी अबस्य पढ्नुहोला
लसुन हामीले भान्सामा दैनिक प्रयोग चिज हो । यसलाई हामी तरकारी र दालमा बडी मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्ने गर्दछौं । लसुन हाम्रो खानाको स्वाद बढाउन मात्र नभई हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि निकै लाभदायक हुनेगर्छ ।
लसुनलाई प्राचिनकाल देखि नै विभिन्न औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाईछ। लसुन हाम्रो शरिरको लागि अति उपयोगी मानिछ । तपाइलाई लसुनको बैज्ञानिक आधारमा के कस्ता फाईदा छन् यसका बारे जानकारी दिंदैछौ । हरेक दिन भुटेको लसुन खानाले हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ । एक पोटि लसुन ३० मिनेटसम्म मुखमा राख्दा हुने फाइदा यस्ता छन्स्(
१० लसुनको नियमित प्रयोगले हामीलाई अकल्पनीय धेरै फाइदा हुने गर्दछ । यसको नियमित सेवनले शरीरको रगत रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुको साथै रक्तचाप बढी अर्थात् ब्लड प्रेसर हाई हुनबाट रोक्छ । शरीरमा बोसो कम पनि गर्दछ । लसुनलाई साँच्चै, एक स्वस्थ चकलेटको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
२० यसमा भिटामिन ए, भिटामिन बी भिटामिन सी, फलाम, इन्जाइम, आवश्यक तेल, आयोडिन, पोटासियम, क्याल्सियम, सेलेनियम, सल्फर र फस्फोरस लगायतका थुप्रै ४०० धेरै मानब शरीरका लागि आवश्यक तत्व पाइन्छ ।
३० लसुनको एउटा पोटी ३० मिनेट वा केहीबेर आफ्नो मुखमा राख्नुहोस्, जसले तपाइँको रक्तनली सफा गर्नुको साथै हजुरको मुखबाट फोहोर हटाउ पनि हटाउदछ । यसरी मुखमा केहीबेर लसुन राख्नाले तपाइको मुखको सामान्य निफेक्सन निको हुनेछ र दुर्गन्ध समेत हराउने छ । त्यस्तै यसले मृगौला,छाला सफा राख्ने कार्य पनि गर्दछ । हामीले नियमित लसुनको प्रयोग गर्न सक्यौ भने यस्ता थुप्रै रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
४० यसले हाम्रो शरीर रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने कार्य गर्नुका साथै अन्य धेरै कुराको लाभदायक रहेको विशेषज्ञको सोधबाट पत्ता लागेको छ । मानिसको स्वास्थ्य राम्रो र बलियो बनाउन विशेषज्ञद्धारा सिफारिस गरिएको एउटा महत्वपूर्ण खाद्यवस्तु हो, लसुन ।
५० लसुनमा ४०० भन्दा बढी भिटामिन तथा खनिज पदार्थ रहेको हुन्छ । लसुन नाम जस्तै मानवको लागी सुन भन्दा पनि अति महत्वपूर्ण रहेको चिकित्स्या बिज्ञानका विशेषज्ञहरुको भनाई छ ।एजेन्सी ।
हड्डि खिइने समस्याबाट बच्न के खाने ?
कब्जियत हुन्छ ? सजिलै यसरी हटाउनुस्